.: SECCA ချစ်သူများအတွက် အထူး အခွင့်ကောင်း
SECCA ချစ်သူများအတွက် အထူး အခွင့်ကောင်း ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ရဲ့ နာမည်ကျော် ရုပ်သံလိုင်း ဖြစ်တဲ့ NHK Channel နှင့် SECCA Skin Care တို့ ပူးပေါင်းပြီး SHOW ME Selfie contest ပြိုင်ပွဲကို စတင်လိုက်ပါပြီရှင် ဒီပြိုင်ပွဲလေး မှာ မိမိကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖျော်ရည်သောက်နေပုံ စတိုင်လ်အမျိုးမျိုးကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးပေးပို့ ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ပေးပို့ ရမယ့် လင့်ကတော့ https://www.facebook.com/showme.mm?fref=photo
Title *** ဖျော်ရည်ချစ်သူ***
** ပြိုင်ပွဲဝင်- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး **
ရေ၊အချိုရည်၊ကော်ဖီ၊လက်ဖက်ရည်စသည့်မိမိနှစ်သက်သော သောက်သုံးဖွယ်ရာများနှင့်တွဲဖက်၍ရိုက်ကူးထားသော selfie ပုံများဖြင့် ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ မျက်နှာနှင့်ဖျော်ရည်များကို မြင်သာအောင်ရိုက်ကူး ပေးစေလိုပါတယ်။ အများနှင့်မတူသောပို့စ်များဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ အမျိုးသားများလည်းပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
ချီးမြှင့်မည့်ဆုလက်ဆောင် SECCA Skin Care one Set , Made in JAPAN, Produced By Su Kabyar SECCA Skin Care for Myanmar Women , Made in Japan products များမှာ မြန်မာ အမျိုးသမီးများ အတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကျွန်မတို့ SECCA Products Myanmar Co.Ltd မှကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်ထားသော skin care များဖြစ်ပါတယ်ရှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်အတွင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ မှ စတင်ပြီး ဖြန့် ချိပေးနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် Japan Skin care များဖြစ်ပြီး ၊ ပထမဦးဆုံး Project အဖြစ်"
1.SECCA Snow Brightening Cleansing Foam
120 ml size = Kyats 25000
2. " SECCA Snow Brightening Lotion
150 ml size = Kyats 30000
3. " SECCA Snow Brightening Gel
50 g size = Kyats 35000
တို့ ကို ဗူးခွံ တိုင်းတွင် " Produced by SU KA BYAR " တံဆိပ်ဖြင့် အာမခံပေးကာ ထုတ်ထုပ်ထားတာကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးတိုင်း မည်သူမဆို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့်
အထူး အာမခံ ချက်အဖြစ် ------Japan နိုင်ငံ အစိုးရမှ အသိအမှတ်ပြု ဓာတုဗေဒ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ရယူထားနိုင်တဲ့ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံချက် ရရှိထားသော SECCA Skin care များဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ဒါ့အပြင် SECCA Skin Care များကို ၀ယ်ယူအားပေးကြသော မိဘ ပြည်သူများအတွက် အထူးအစီအစဉ် အဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင် $ 200 ၀န်းကျင် တန်ဖိုးရှိ မျက်နှာအသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်း အဆင့်ဆင့် နည်းပညာ၊ မျက်နှာ V Shape ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ ၀က်ခြံ တင်းတိတ် နေလောင်ကွက်များ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးခြင်းများကို မေတ္တာလက်ဆောင် ပြန်လည်
ပြုလုပ်ပေးနေတာကြောင့် အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက
ဖုန်း 09 420745117 , 09 428150568 များသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့် အားပေးဝယ်ယူမှုများအတွက်‌ မိတ်‌‌ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့် ကိုယ်စားလှယ်ယူလိုသူများ ဆက်‌သွယ်‌ရန်‌
SECCA Products Myanmar Co.Ltd
ခြံ No. 70 , နတ်မောက်လမ်းသွယ် ( ၁) ၊ ဗဟန်း ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
"SECCA" Skin Care for MYANMAR Women !